Agribusiness | Banda Post
Labor & Employment 39
Land & Infrastructure 69
Natural Resource & Energy 45
Homepage / Agribusiness
Central Bank 0
@ကျင်းပမည့်နေ့ရက် – စက်တင်ဘာ ၁ ၊၂၀၁၉
@ကျင်းပမည့်အချိန် – မနက် ၉း၃၀ နာရီ-ညနေ ၃း၃၀
@ကျင်းပမည့်နေရာ – နိုဗိုတယ်ဟိုတယ်၊ ရန်ကုန်
Created with Raphaël 2.1.0 and Mapael (http://neveldo.fr/mapael) Kachin Sagaing Shan Chin Magway Mandalay Kayah Rakhine Bago Kayin Ayeyarwady Yangon Tanintharyi Mon Naypyitaw
တိုင်းနဲ့ ပြည်နယ်အလိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဦးစားပေး ကဏ္ဌာများ
Top Five Investment Potential Sectors for States & Regions ပါ။ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်အနေနဲ့ ပြည်နယ် နှင့် တိုင်းဒေသကြီး(၁၄)အလိုက် ဦးစားပေးခွင့်ပြုပေးမယ့် လုပ်ငန်းကဏ္ဌာ အလိုက် တွေပါ။အဆင့်(၅)ဆင့် သတ်မှတ်ထားပြီး တခုနဲ တခု မတူတာ
မန္တလေးတိုင်းအတွင်း မြေလွတ်မြေရိုင်း ဧက ခြောက်သိန်းကျော်ရှိ
Tags: vacant land in mandalay region
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအတွင်း မြေလွတ်မြေရိုင်း ဧက(၆၂၀ဝ၀ဝ)ကျော် ရှိပြီး ယင်မြေနေရာများတွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ရင်းနှီးမြုပ်နှံလုပ်ကိုင်ရန် တိုင်းအစိုးရက ဖိတ်ခေါ်ထားသည်။ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များမှ မြေလွတ်မြေရိုင်းများ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရန် လျှောက်ထားရာတွင် နှစ်ရှည်သီးနှံ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများအတွက် တစ်ကြိမ်လျှင် ဧက(၅၀ဝ၀)ဖြင့် စတင်လျှောက်ထားနိုင်ပြီး လုပ်ငန်း(၇၅)ရာခိုင်နှုန်းပြီးစီးပါက ထပ်မံလျှောက်ထားကာ အများဆုံးဧက(၅သောင်း)အထိ အကြိမ်ကြိမ်ခွင့်ပြုပေးဖြစ်သလို
နှစ်အလိုက် ကျွဲ၊နွား၊ဆိတ်၊ဝက်၊ကြက်နဲ့ ငါးပုစွန် ထုတ်လုပ်မှု စာရင်း
နှစ်အလိုက် ကျွဲ၊နွား၊ဆိတ်၊ဝက်၊ကြက်နဲ့ ငါးပုစွန် ထုတ်လုပ်မှု စာရင်း စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ နှစ်အလိုက် အစီရင်ခံစာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သားငါး ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍအတွက် ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်ကနေ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ စာရင်းကို ဒီနေရာမှာ ရရှိနိုင်ပါတယ်။လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဦးစီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားတဲ့
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဆီထွက်သီးနှံစိုက်ပျိုး ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေများ
Tags: Ayeyarwady, oil crops production
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးထဲမှာ ဆီထွက်သီးနှံစိုက်ပျိုးတာက စိုက်ဧက တစ်သိန်းခွဲခန့် နှစ်စဉ်လျာထားစိုက်ပျိုးနေတယ်လို့ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနရဲ့ စာရင်းမှတ်တမ်းတွေအရသိရပါတယ်။ ဆီထွက်သီးနှံစိုက်ပျိုးမှုတွေအနေနဲ့ က မြေပဲ နှမ်းနှင့် နေကြာတွေကို ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမှာ စိုက်ပျိုးကြပေမယ့် နေကြာစိုက်ပျိုးတာကတော့ အထွက်နှုန်းကြောင့် တွက်ခြေကိုက်မှု အားနည်းနေသေးတာကြော်င့ အောင်မြင်မှုအားနည်းနေတဲ့အခြေအနေပါ။ အဲဒီတော့ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးထဲမှာ ဆီထွက်သီးနှံစိုက်ပျိုးမှုက
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတို့တက်ရေးလုပ်ဆောင်မှုနဲ့ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ
Tags: Agriculture, Ayeyarwady, JICA
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရရဲ့ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတို့တက်ရေးလုပ်ဆောင်မှုနဲ့ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ ဧရာဝတီတိုင်းအနေနဲ့ ဆန်စပါးကိုအဓိကစိုက်ပျိုးပြီး စိုက်ပျိုးမြေဧက စုစုပေါင်းရဲ့ ၈၃ ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်။ ဒုတိယအနေနဲ့ မတ်ပဲ နဲ့ ပဲအမျိုးမျိုးကို စိုက်ပျိုးပါတယ်။ အစိုးရအနေနဲ့ကတော့ စိုက်ပျိုးကဏ္ဍမှာ အများဆ်ု့းစ်ုက်ပျိုးတဲ့ လယ်ယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုသာ အဓိကထားလုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဧရာဝတီတိုင်းအနေနနဲ့မိုးစပါးစိုက်ဧက(၃.၇)သန်းကျော် ၊ နွေစပါးစိုက်ဧက
မွန်ပြည်နယ် အစိုးရ ထူထောင်မည့် ရော်ဘာစီးတီး နောက်ဆုံး အခြေအနေ
Tags: mon state rubber city project
မွန်ပြည်နယ် အစိုးရသည် ရော်ဘာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရော်ဘာစက်မှုဇုန်(သို့) ရော်ဘာစီးတီး စီမံကိန်း တစ်ရပ်ကို အကောင်အထည်ဖော် တည်ဆောက်ရန် ကြိုးပမ်းနေသည်။ အဆိုပါ ရော်ဘာစီးတီး စီမံကိန်းကို မုဒုံမြို့ နယ် ခပ်ရခပ်ယူဘုရား အနောက်ဘက်ရှိ မြေဧကပေါင်း ၃၆၈ ဧက ပေါ်မှာ အကောင်အထည်
မွန်ပြည်နယ်မှာ ရော်ဘာစိုက်တောင်သူများကို ချေးငွေ ထုတ်ပေးရန် စီစဉ်နေ
မွန်ပြည်နယ်သည် ရော်ဘာ စိုက်ဧကပေါင်း ငါးသိန်း ကျော်ရှိနေသည့် ပြည်နယ် တစ်ခု ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ရော်ဘာ ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကျွမ်းကျင်လုပ်သား၊ နည်းပညာအပါအဝင် ချေးငွေများလည်း လိုအပ်နေသည်။ ရော်ဘာချေးငွေ ရရှိရေးအတွက်လည်း ရော်ဘာစိုက်တောင်သူများက မွန်ပြည်နယ် အစိုးရထံ ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ကုန်ပိုင်းက
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ ပိုးသတ်ဆေးလုပ်ငန်းနှင့် တိုင်းဒေသကြီးပိုးသတ်ဆေးဥပဒေ
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအပင်နှင့်သီးနှံဖျက်ပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ရေးဥပဒေကို ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်က ၂၀၁၄ခုနှစ်မှာပြဌာန်းထားပါတယ်။ အခန်း ၁၃ခန်းပါတဲ့ အဲဒီဥပဒေမှာ လိုင်စင်စီစစ်ထုတ်ပေးဖို့ ၊ ကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီး စစ်ဆေးရေးအဖွဲဲ့တွေနှင့် ပိုးသတ်ဆေးဆိုင်တွေကို စစ်ဆေးဖို့နှင့် စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်တာတွေကို ငွေဒဏ်ကျပ်ဒဏ်ငွေ နှစ်သိန်းနှင့်ထောင်ဒဏ်ခြောက်လကနေ ဒဏ်ငွေ သုံးသိန်းနှင့် ထောင်ဒဏ် နှစ်နှစ်အထိ ချမှတ်နိုင်တဲ့ ပြစ်မှုပြစ်ဒဏ်တွေကိုပြဌာန်းထားပါတယ်။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးထဲမှာ
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ စပါးမျိုးကောင်းမျိုးသန့်ရရှိမှု အခြေအနေ
မြန်မာ့ဆန်က န်ိုင်ငံတကာ ဈေးကွက်မှာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ ယှဉ်ပြီးရောင်းနိုင်ဖို့က အရည်အသွေးကောင်းဖို့နဲ့ နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်မှု စံချိန်စံညွှန်းသတ်မှတ်ချက်တွေနှင့် ကိုက်ညီဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ အဲဒီလို ကိုက်ညီဖို့ဆိုတာက FAO (Food and Agriculture Organization) ကုလသမဂ္ဂစားနပ်ရိက္ခာနှင့်စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့နှင့် WTO (World Trade
ဧရာဝတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ ဓာတ်မြေသြဇာသုံးစွဲမှုနှင့် တိုင်းဒေသကြီးမြေသြဇာဥပဒေအကြောင်း
Tags: agricultural input
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမှာ မိုးစပါးစိုက်ဧက ၃၇သိန်း နှင့် ဆောင်းစပါး စိုက်ဧက ၁၄သိန်းခန့်ကို နှစ်စဉ် စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နေတဲ့တိုင်းဒေသကြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို မိုးစပါးပြီး ဆောင်းစပါး ၊တစ်ရာသီ ပြီး တစ်ရာသီ ၊တစ်သီးပြီး တစ်သီး စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နေတဲ့ အတွက် လယ်ယာမြေတွေမှာ အော်ဂဲနစ်နည်းနဲ့ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့
Never missed any post published in our site. Subscribe to our daily newsletter now.
Bussiness Section of Media
Centre for Economic and Social Development
International Growth Centre Myanmar
Sustainable Development Knowledge Network
Myanmar Statistical Information Service
National Trade Portal Myanmar
Open Myanmar Initiative's Budget Explorer
Global Witness ​
Invest in Myanmar ​
Myanmar Centre for Responsible Business ​
International Monetary Fund ​
Copyright 2017 - by BandaPost